Wararka - Is-beddelka Mid-Dayrta Loogu Talo Galay Ku Xadgudubka Kulliyadda sannadka 2020
Badhtamaha-Dayrta Loogu Baahan Yahay Khiyaanada Kuleejka ee 2020
Bishii Sebtember 29, 2020 Jitai Electronics Co., Ltd waxay qabatay bartamihii-Dayrta Coversazione ee ardayda jaamacadda sannadka 2020 taas oo ah mid ka mid ah dabeecadaha wanaagsan ee shirkaddayda waxayna siisaa fursad ay ku koraan naftooda kuwaas oo ku soo biiraya shirkadda. Dhanka kale sidoo kale waa barxad loogu talagalay qof walba inuu ku dhaqmo naftiisa (nafteeda). Wadar ahaan 40 arday cusub oo kulliyadeed ah oo ka kala socda waaxyo kala duwan ayaa kaqeyb qaatay Wadahadalka Mid-Dayrta.
Nuxurka kulankan ayaa ujeedkiisu yahay fikradaha ka imanaya Jack Ma, aasaasaha shirkadda Alibaba "shucuurta wadaagga, caqliga caqliga leh, kan farxadda leh" iyo "shucuurta ayaa go'aamisa qaddarka" "xaaladdu waxay go'aamisaa aayaha". Ardayda kulleejada ee shirkadeena waxay sameeyaan faallo ku saleysan fahamkooda.
Kaqeybgalayaasha wadahadalka ayaa si dhab ah uqaatay waxayna sameeyeen diyaargarow buuxa gaar ahaan qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha da 'yar waxayna faalleeyeen ra'yigiisa (iyadu) si geesinimo leh. Dhammaan faallooyinka waxaa qiimeeyay shirkaddu si fudud oo aasaas u ah qoondaynta shaqada, dhiirrigelinta mushaharka, xulashada horumarsan iyo abuuritaanka heer sare.
Dhamaadka dhamaadka wadahadalka, Jun Ma, gudoomiyaha shirkadeena wuxuu soo gabagabeeyay in fadhiyada suuqyada banaanka ee 2020 ay wanaagsanaayeen, tirada dalabku ay ahayd mid kufilan, laakiin shirkadeena ayaa culeysyo badan saartay waxayna la kulantay dhibaatooyin badan iyo caqabado sidaa darteed waxaan rajeeyay dhammaan shaqaalihii hore iyo ardayda cusub ee kulleejada waxay sii wadeen inay ku ciyaaraan hibadaada oo ay ku dabaqaan aqoonta iyo khibrada leh xamaasad buuxda oo shaqada ah walina waxay sii kobcinayaan qaab shaqeedkooda wax ku oolka ah si ay ula qabsadaan arrimaha qodxaha leh una tiigsadaan hadafkaaga oo ha u oggolaan inaad sii dardar geliso xaqiijinta himilada wax soo saar. ee shirkadeena sanadka 2020 dadaal iyo halgan. Isla markaa waxaan dhammaantiin u rajeeyey ciid wanaagsan iyo qoys faraxsan. Ugu dambayntii Wuxuu rajaynayaa in qof kastaa horumar iyo horumar ka helo shirkadda.
Iyada oo loo marayo wada hadalkan, kaliya maahan ardayda kuleejka ah ee da 'yarta ah inay midba midka kale sahamiyaan, kor u qaado dareenka midba midka kale ee barxadda, laakiin sidoo kale wuxuu xoojiyaa kalsoonidooda iyo go'aan qaadashada inay xidid ku yeeshaan shirkadda.